Wemusango Apurikoti: Iyo Yese-In-Imwe Inobhadharwa Nhengo Yepuratifomu | Martech Zone
Sezvo masangano ari kutarisa kune ramangwana, mumwe mukana ndeyekuvaka kunze kwemitezo yemitezo inobhadharwa. Masangano, asiri-purofiti, nheyo, makirabhu, mapoka emitambo, mapoka ekudzidzisa, uye dzimba dzekutengesa zvese zvinoda mapuratifomu ekugadzirisa kwavo kuvepo kwedhijitari, nharaunda yekutaurirana, zviitiko, kunyorera, madhairekitori, uye zvitoro zvepamhepo.
Wild Apricot agara ari mutungamiri mune ino indasitiri, aine yekunze-kwe-bhokisi chikuva chekutarisira chero yakabhadharwa inhengo yemabhizimusi bhizinesi. Masangano anopfuura makumi matatu anoshandisa Wild Apricot kukwezva, kuita, uye kuchengetedza nhengo dzadzo.
Masango eApurikoti Nhengo Ipuratifomu Inosanganisira:
Nhengo Zvikumbiro - Wenhengo yeApricot yenhengo manejimendi software inonyatso gadzirisa maitiro ekunyorera kuti ubatsire kupa yako mitezo mitsva pfungwa yekutanga. Cheka mapepa akaomarara nekugadzira iyo web-based, mbozhanhare-inoshamwaridzika fomu apo vanyoreri vanogona kupa ruzivo rwese rwaunoda uye kubhadhara online nekadhi rechikwereti.
Kuvandudza Nhengo - Cheka rako rekutungamira basa nekupa sarudzo-yekuzvishandira kunhengo: vanogona kumutsiridza yavo yega nhengo ipapo nekupinda muprofita yavo. Ivo vanogona zvakare kuchengetedza zvakachengetedzeka yavo yega ruzivo rwekutaurirana, kunyoresa zviitiko, uye kubhadhara nhengo dzemari pakombuta yavo kana kubva kune yavo nhare mbozha.
Nhengo Dhatabhesi - Vazvipiri uye nhengo dzebhodhi vanokwanisa kuwana iyo imwecheteyo dhatabhesi pamhepo, uye kugadzirisa kune ako enhengo marekodhi anoitika nekukasira, saka data rako rinogara riri parizvino. Iwe unogona kuendesa yako yenhengo ruzivo kubva paspredishiti uye gadzirisa dhatabhesi kuti ienderane nezvaunoda.
Nhengo Dhairekitori - Kunyangwe iwe ukagadzira dhairekitori reruzhinji remabhizimusi enhengo dzako, kana kuvaka dhairekitori chete nhengo dzako dzinogona kuona, unogona kudzora kuti ndeupi ruzivo rwunoratidzwa nedhairekitori rega. Uye kunyangwe yako webhusaiti yakavakwa muWild Apricot kana imwe chikuva, unogona kupinza zviri nyore nhare-inoshamwaridzika nhengo madhairekitori pawebhusaiti yako.
Nhengo Webhusaiti - Iwe unogona kugadzira webhusaiti nyowani-inoshamwaridzika webhusaiti neWild Apricot yekudhonza-uye-kudonha inovaka, kana kuwedzera hunhu maficha kune yako iripo webhusaiti nekumisikidza nhengo dzekunyorera fomu mafomu, madhairekitori, uye zviitiko zvakanyorwa semawadhi. Ehezve, saiti iyi inosanganisira ese maviri mablog uye maforamu ekubatanidza nhengo dzako.
Nhengo-Chete Mapeji - Unogona kuvaka nhengo yekubatana nekupa mukana wekupinda enhengo-dzega mapeji ewebhu, senge maforamu enetiweki uye chaiwo mablog. Iwe unogona zvakare kugadzirisa kuti ndeapi mamiririri enhengo kana mapoka aunoda kuwana peji rega rega.
Event Management - online chiitiko kunyoresa chinotora kunetseka kubva mukumhanya zviitiko. Mukati memaminetsi iwe unogona kugadzira yakadzama chiitiko rondedzero nerondedzero uye mifananidzo, pamwe neyepamhepo chiitiko kunyoresa fomu. Zviitiko zvako zvinobva zvango nyorwa pakarenda pane yako saiti Apricot saiti kana iripo webhusaiti saka haufanire kuisa zvakare ruzivo, uye nhengo dzako dzinogona kuona chiitiko online online kubva kune yavo nhare mbozha kana komputa.
PCI Inoenderana Nekubhadhara - Wild Apricot's online mubhadharo wekugadzirisa software inotora musoro kunze kwekugamuchira nekutevera kubhadhara uye kugadzirisa yako mari yesangano. Nhengo dzako nevatsigiri vanogona kubhadhara online kubva kumacomputer avo kana nhare mbozha yemari yehunhengo, mari yekunyoresa, uye zvipo, kana kumisikidza mari inodzokororwa kuchengetedza nguva nekunetseka. Iwe unogona zvakare kumisikidza akawanda mutero wekutengesa kana VAT nekungodzvanya mashoma, uye otomatiki shandisa izvi kune online kutengeserana mune chero mubatanidzwa waunosarudza. Wild Apricot Kubhadhara kunoitiswa neAffiniPay, mubhadharo wekugadzirisa mhinduro ane makore gumi nemashanu echiitiko.
Invoicing - Kamwe kubhadharwa kwepamhepo paunosimbiswa, rekodhi rekubhadhara rinogadzirwa roga, uye invoice inoenderana inovandudzwa Iwe unogona zvakare kuseta zvimwe zviito zvinokonzereswa, kusanganisira kumisikidza kuve nhengo kana kutumira maemail anotambirwa, mareisiti ekunyoresa zviitiko, kana kusimbiswa kwemipiro.
Zvemari Kushuma - Nemishumo yemari yeWild Apricot, unogona kuwana mufananidzo uzere wezvemari yesangano rako usingade akawanda maspredishiti. Iwe unogona kurekodha kubhadhara kunoitwa nemari uye wotarisa muWild Apricot pamwe nepamhepo kubhadhara, saka yako yese yekubhadhara data iri munzvimbo imwechete. Unogona zvakare kutumira data rako remari kuExcel kana QuickBooks.
Mipiro Yepamhepo - Chinja webhusaiti yako kuita chishandiso chakasimba chekutsvaga mari. Nekushandisa yedu yepamhepo kubhadhara software yekugadzirisa iwe unogona kuseta zviri nyore peji yezvipo pawebhusaiti yako, saka vashanyi kune yako saiti vanogona kupa rutsigiro rwemari iwe rwaunoda kubva chero kwavanenge vari.
Email Marketing - Vaka maemail anotaridzika nehunyanzvi kubva kumatemplate edu ane hushamwari uye utumire risingagumi maemail. Shambadzira fomu rekunyorera-fomu pawebhusaiti yako, kana tarisa maemail ako nekugadzira vanogamuchira zvinyorwa zvinoenderana nechero zviyero, senge chinzvimbo chemumiriri kana kupinda kwechiitiko. Iwe unogona kuteedzera mashandiro ako eemail mishandirapamwe ane huwandu pakuendesa, kuvhura, uye zvinongedzo zvakadzvanywa kune yega meseji uye nekubata kwese.
Otomatiki maemail - Shandisa nguva shomashoma kutumira mameseji nekumisikidza otomatiki email zvivimbiso uye zviyeuchidzo zvekuve nhengo, zviitiko, uye zvipo. Iwe unogona kuona kuti nhengo dzako dzichiri kuwana ruzivo rwakasarudzika nekugadzirisa iwo mameseji uye kushandisa email macros (akafanana netsamba kusanganisa minda).
Administrator Nharembozha App - Manage invoice uye rekodhi kubhadhara kubva kune yako nhare mbozha neyemahara Wild Apricot nharembozha yevatungamiriri. Zvezviitiko, iwe unogona kubata vanobatika uye kutarisa-mune zviitiko vanyoresa kubva kune yako nhare mbozha.
Zviitiko Mobile App - Batsira nhengo dzako kuti dzibatane pamwe chete kana veruzhinji nekushandisa akawanda madhairekitori emitezo anogara aripo kusvika pari zvino.
WordPress Plugin uye Imwe Saina-Inotarisa - Kana iwe urikushanda neWordPress saiti, iwe unogona zvakare kushandisa Wild Apricot kusaina-kusaina-kuendesa, kuendesa majeti, uye kukiya pasi zvemukati zvemitezo chete.
Edza Wild Apricot Yemahara kwemazuva makumi matatu
Kuzivisa: Ndiri mubatanidzwa we Wild Apricot
Tags: manejimendi manejimendishamwarimanejimendi manejimendimakirabhuecommercekunyoresa chiitikohwaro manejimendinheyonhengo chikuvanhengo softwareisiri-purofiti manejimendizvisina faidamitambo yemitambozvemitambo manejimendiyekudzidzira webhusaiti chikuva